Keyboard – Unicode Today
Keyman Keyboard ထည့်သွင်းနည်း
Keymagic ကဲ့သို့ အသုံးပြုပုံတူညီတဲ့ နောက်ထပ် Keyboard လက်ကွက်တခုကတော့ Keyman ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Keyman ကို ယခင်က အခကြေးငွေဖြင့်သာ သုံးစွဲခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အခု ၂၀၁၇, ဩဂုတ်လ ၂၃ မှစပြီး အခမဲ့ဖြစ်သွားပါပြီ။ Keyman ကို Windows, Mac, iPhone, iPad, Android စသည်ဖြင့် သက်ဆိုင် စနစ်များဖြင့် သုံးစွဲနိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အခု Windows Version အတွက် ထည့်သွင်းသုံးစွဲနိုင်အောင် ဖေါ်ပြပေးပါမယ်။ Internet Explorer9အထက်ဖြစ်ရပါမယ်။ လက်ကွက်ယူရန် Keyman Desktop 10 Myanmar3 (SIL) + Keyman Desktop ကို Download ရယူပါ။ ဒေါင်းယူထားတဲ့ဖိုင်လေးကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး install […]
အဆင့်(၁) အောက်တွင်ပေးထားသောလင့်မှ KeyMagic-V2.0Pre-4 ကိုဒေါင်းယူပါ။ KeyMagic-v2.0Pre-4 အဆင့်(၂) ဒေါင်းလုဒ်ရယူထားသော KeyMagic-v2.0Pre-4 ဖိုင်အား zip ဖြည်ပါ။exe ဖိုင်အား Left Click နှစ်ချက်နိုပ်ပါ။Run ကိုနှိပ်ပါ။ အဆင့်(၃) Yes ကိုနှိပ်ပါ။ အဆင့်(၄) -ပြီးလျှင် I accept the agreement ဘေးရှိအစက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ -ပြီးလျှင် Next ကိုနိုပ်ပါ။ -ပြီ:လျှင် Createadesktop shortcut လုပ်မလုပ်မေးပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ချင်လျှင် Createadesktop shortcut ဘေးရှိ box တွင် အမှန်ခြစ်ပါ။ မလုပ်ချင်လျှင်လည်းရပါတယ်။ -ပြီးလျှင် Next ကိုနှိပ်ပါ။ –Ready to Install box ကျလာလျှင် Install ကိုနှိပ်ပါ။ […]
Myanmar Unicode တွင် keyboard လက်ကွက်များစွာရှိရာ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာ keyboard လက်ကွက်ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။လက်ကွက်များစွာထဲမှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ လက်ကွက်ကို အချိန်တိုအတွင်း လက်ကွက်တစ်ခုမှ အခြားလက်ကွက်တစ်ခုသို့ လွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ရန် keymagic အတွင်းမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ လက်ကွက်များကို ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ Pyidaungsu MM Keyboard ကိုနမူနာအဖြစ်ထည့်သွင်းရှင်းပြထားပါသည်။အခြားသောလက်ကွက်များကိုလည်းဤနည်းအတိုင်းထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Pyidaungsu MM အဆင့် (၁) Keymagic သို့အရင်သွားပါ။ အဆင့် (၂) Keymagic ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်အောက်ပါအတိုင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဆင့် (၃) ပြီးရင် Add button အား တစ်ချက်နိုပ်ပါ။ အဆင့် (၄) Windows Explorer ပေါ်လာပြီဆိုပါကဒေါင်းလုဒ်ရယူထားသော Keyboard လက်ကွက် ( Pyidaungsu MM.km2 ) […]
Apple ကွန်ပျူတာတွင် Keymagic ထည့်သွင်းနည်း
Keymagic ရယူရန် 1. Keymagic Keyboard ကို ရယူပြီးရင် ၂-ချက်နှိပ်ပြီး ဆက်လုပ်( install) သွားပါ။ 2.System Preferences -> Language & Text ကိုဖွင့်ပါ။ Input Sources tab ကိုရွေးပါ။KeyMagic ကိုရှာပါ။KeyMagic ကိုအမှန်ခြစ်ပါ။ 3. ပြီးသွားရင် Key လက်ကွက်တွေရှိတဲ့နေရာမှာ(နိုင်ငံအလံ ရှိတဲ့ နေရာ) နှိပ်လိုက်ပါ။ ပွင့်လာရင် Keymagic ကိုရွေးပေးရင်ရပြီ။ 4. စာရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် အလံရှိတဲ့ လက်ကွက်နေရာမှာ Keymagic ကိုရွေး ရမယ်။ Keymagic က လက်ကွက် ၃-၄ မျိုးလောက် ထည့်ပေးထားမှာပါ။ 5. အင်္ဂလိပ်ကီးဘုတ်နှင့် မြန်မာကီးဘုတ်ကို (Command + Space bar) နှိပ်ပြီး တစ်လှည့်စီ ပြောင်းလဲ […]
Apple ကွန်ပျူတာတွင် Keyboard လက်ကွက် .km2 ထည့်သွင်းနည်း
Keymagic အတွင်းထည့်သွင်းအသုံးပြုရမည့်လက်ကွက်များရယူရန် Download ရယူထားသော Keymagic အတွင်းထည့်သွင်းအသုံးပြုရမည့်လက်ကွက်များ ဖိုင်အား zip ဖြည်ပါ။နမူနာအနေဖြင့် Myanmar3လက်ကွက်အား keymagic အတွင်းထည့်သွင်းပုံကိုပြသပေးသွားပါမည်။ ထို့နောက် ‘Myanmar3.km2’ ဖိုင်ကို copy ကူးပြီး Desktop တွင် paste လုပ်ပါ။ Terminal ကို ဖွင့်ပါ။ cd desktop sudo cp Myanmar3.km2 ~/.keymagic/ .km2 နှင့် ~/ ကြားတွင် space တစ်ခုခြားပါ။ Password တောင်းပါလိမ့်မည်၊ ရိုက်သွင်းပြီး Enter နှိပ်ပါ။ ( ကိုယ့်စက်ကို Log In ဝင်တဲ့ password ပါ ) KeyMagic ထဲသို့ Myanmar3 လက်ကွက်ကို […]
ယူနီကုဒ်ဖောင့်တွေကို ရိုက်တဲ့အခါမှာ မြန်မာ၃ဖောင့်အတွက် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ ယူနီကုဒ် ကီးဘုတ်လက်ကွက်ဟာ မှတ်သားအရ အလွယ်ဆုံးနဲ့ အရှင်းဆုံး အကျုံ့ဆုံးဖြစ်တာကို သတိထားမိပါတယ်။ မြန်မာစာကို သင်ပုန်းကြီးအတိုင်း ရိုက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ ဒီလက်ကွက်နဲ့ရိုက်ရင် စာရိုက်တဲ့အမြန်နှုန်း သိသိသာသာ တက်လာတာ သတိထားမိပါတယ်။ မလိုတော့တဲ့ ကီးအပိုတွေ ဖယ်ပြီး ကျုံ့အောင်လုပ်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက် အရင့်အရင် လက်နှိပ်စက်၊ ဝင်း၊ ဇော်ဂျီလက်ကွက်တွေနဲ့ ကွဲသွားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဓိက ဝလုံး ယပက်လက် ဂငယ် နေရာတွေ ပြောင်းသွားတာပါ။ မြန်မာစာ စရိုက်တဲ့လူတွေအတွက် ဘယ်လက်ကွက်ထက်မဆို လွယ်ပါတယ်။ တခြားကီးဘုတ်က ပြောင်းတဲ့သူတွေအတွက် နည်းနည်းသတိထားပြီး တစ်ပတ်လောက် ကျင့်ယူလိုက်ရင် ကျွမ်းကျင်သွားမှာပါ။ အခုဒီမှာပြထားတဲ့ လက်ကွက်ပုံကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဝီကီအရေးဆုံးလူဖြစ်တဲ့ ကိုမြတ်သွင်က မှတ်သားရလွယ်ကူအောင် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြန်ဆွဲပေးထားပါတယ်။ ဒီပုံကို ဘယ်သူမဆို […]
This Month: 86879